သစ်ဆန်းခန့်: G510 U8951 4.1.1 Root
G510 U8951 4.1.1 Root
G510 U8951 4.1.1 Root လေးပါ လိုဒါကိုအောက်မှာဒေါင်းပါ G510 U8591 Kernel dload ကိုဒီမှာဒေါင်းပါ http://www.mediafire.com/?qgoztx21n905p2w
ရလာတဲ့Zip ကိုဖြည်လိုက်ပါ dload ကိုရပါမယ် SD Card ထဲ ကို ထည်ပါ ဖုန်းကို ပိတ်လိုက်ပါ ထုံးစံ အတိုင်းပေါ Vol Up + Vol Down + power ကိုနိပ်လိုက်ပါ Update လုပ်သွားပါမယ် ဖုန်းပြန်တက်လာပြီးဆိုရင် Unknown Soures & USB debugging ကို အမှန်ချစ်ပေး Unlock Root 3.0 နဲ့ Root လိုက်ပါ မှတ်ချက် Bulid number B165 & B168 ကိုဘဲ Root လို့ ရမှာပါ
Bulid number B173ကို Root ရင်တော့ ကင်မရာ ပြောက်သွားပါမယ်
ARKAR TUNFebruary 6, 2013 at 2:04 AMUnlock Root 3.1 နဲ့ Root လိုက်ပါဆိုတာ ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ် ရပါသလား ? အ သေးစိတ် လေးလုပ်ပါဦးReplyDeleteRepliesAnonymousFebruary 10, 2013 at 12:17 AMfuttkyar nga ah.. computer connected phone (setting >usb debugging on>driver detect သိရင် unlock root 3.1 က root ဆိုတာနှိပ်လိုက် restart ကျသွားရင် root accessDeleteReplyEmanuel RochaFebruary 7, 2013 at 3:34 PMfunciona ? ReplyDeleteAnonymousFebruary 9, 2013 at 2:23 PMAmazing!!! it works, danke!ReplyDeleteMarina RfFebruary 13, 2013 at 8:02 PMcwm နဲ့ gapps လေးလည်း လိုချင်သေးတယ်ခင်ဗျReplyDeleteMarina RfFebruary 13, 2013 at 8:02 PMcwm နဲ့ gapps လေးလည်း လိုချင်သေးတယ်ခင်ဗျReplyDeleteMarina RfFebruary 13, 2013 at 8:03 PMcwm နဲ့ gapps လေးလည်း လိုချင်သေးတယ်ခင်ဗျReplyDeletethuraFebruary 23, 2013 at 8:28 AMါ http://www.mediafire.com/?qgoztx21n905p2w ကနေဒေါင်းလိုမရဘူးခင်ဗျာ အခြားဘယ်လိုဒေါင်းလို့ရမလဲ ..ReplyDeleteAnonymousMarch 5, 2013 at 7:50 PMvol up + vol down + power နှိပ်လိုက် ရင် ခရမ်းရောက် စခရင်ကြီးပဲပေါ်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လည်းမသိဘူး ပြောပြကြပါဦးနော်ReplyDeleteAnonymousMarch 6, 2013 at 12:05 PMကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲ သေချာလေးတစ်ဆင့်ခြင်းပြောပြ စေချင်ပါတယ် အခုမှလေ့လာနေသူတွေအတွက်အခက်တွေ့နေလို့ပါခင် ဗျာReplyDeleteAnonymousMarch 10, 2013 at 9:03 PMvol up + vol down + power နှိပ်လိုက် ရင် ခရမ်းရောက် စခရင်ကြီးပဲပေါ်နေတယ် ဆိုရင် 2GB SD card နဲ့လုပ်ကြည့်ပါ..အိုကေပါတယ်..buildnumber ---168 နဲ့ဆုံးတာမှာတော့လုပ်ရင်ရတဲ့ အလုံးရပီး မရတဲ့အလုံးက Firmware ကျသွးတတ်ပါတယ်..ReplyDeleteRepliesAnonymousApril 8, 2013 at 12:15 AMa dr so bal lo root ya ma laDeleteReplyAnonymousMarch 16, 2013 at 2:42 AMအကို unlock root 3.1 နဲ့ လုပ် တာ fail to get shell root ဆို ပီး တော့ ပြ နေ တယ် ver ပြာင်း ပီး ပီ B165 လုပ် ပီး တားReplyDeleteAnonymousMarch 16, 2013 at 10:17 PMunlockroot ကို၃.o down မရဖြစ်နေတယ်ReplyDeleteAnonymousMarch 24, 2013 at 5:00 PMeres un putoReplyDeletetharngeMarch 25, 2013 at 10:39 PMမြန်မာစာက သွင်းလို့ရသွားပြီခင်ဗျ ဒါပေမယ့်စာရိုက်ရင် စာလုံးတွေက အမှန်မရဘူးဖြစ်နေတယ် ကူညီလို့ရရင်ကူညီပါဦးReplyDeleteRepliesAnonymousApril 13, 2013 at 7:37 PMfrozen keyboard pro နဲ့ရိုက်ကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေပါတယ်။DeleteReplyAnonymousMarch 31, 2013 at 6:09 AMCan i take this for G510 B170????ReplyDeleteAnonymousApril 5, 2013 at 5:25 AMb168 မှာ restart ပြန်ကျနေတယ် u8951b168 official firmware ရှိရင်တင်ပေးပါအကို firmware မရှိရင်လဲ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပြပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ReplyDeleteAnonymousApril 5, 2013 at 6:25 AMgo to deadReplyDeleteAnonymousApril 8, 2013 at 12:12 PMHi, do you have the rooting process in English, please ?ReplyDeleteAnonymousApril 10, 2013 at 9:35 PMB173 ကို့ Unlock Root 3.1 နဲ့ Root လိုက်တာ ဘာ Error rှ မရှိပဲ အောင်မြင်စွာနဲ့ Root လိုက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော့လို B173 သမားတွေလဲ စိတ်ချလက်ချနဲ့ Root လို့ရအောင် သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါတယ် Unlock Root 3.1 နဲ့နော်ReplyDeleteAnonymousApril 12, 2013 at 11:42 AMFirmware ကျသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပြပေးပါ နော်မသိလို့ပါ thankReplyDeletejuanmaApril 15, 2013 at 10:31 PMFunciona bien ReplyDeletenaingminooApril 18, 2013 at 8:56 AMဟိုင်းb173 အတွက် လိုချင်ပါတယ်ကူညီပါခင်ဗျာReplyDeleteAnonymousApril 19, 2013 at 4:20 AMCWM plzReplyDeleteAnonymousApril 25, 2013 at 4:17 AMအကို U8951 (B173) ကိုဘယ်လိုrootရမလဲ ReplyDeleteAnonymousApril 25, 2013 at 4:20 AMအကြောင်းပြန်ပေးရင်သိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ReplyDeleteAnonymousMay 4, 2013 at 8:41 AMu8951 B173 ကို root နည်းလေး တင်ပေးပါဦးReplyDeleteRepliesAnonymousMay 12, 2013 at 1:15 AMphone ကို unlock code တောင်းပြီး unlock ဖြည်ထားပါ။ ပြီးတော့ C 8813 root နည်းနဲ့လုပ်လိုက်ပါ။ cwm ကော root ကောရတယ်။ ကျွန်တော်တော့ အဆင်ပြေတယ်ဗျ။ မေးချင်ရင် kokyawsoe81@gmail.com ကိုလှမ်းမေးနိုင်ပါတယ်။DeleteReplyAdd commentLoad more...
Huawei U8950D Recovery သွင်းနည်း
Moborobo 2.1.0 Android PC Suit
Download Link အပျက်များရှိလျင် အသိပေးပါ
U8825D Unlock Code မတောင်းဘဲ Root လုပ်လို့ တက်တဲ့ ...
Y220T Root လုပ်နည်း
Onda tablet 4.1.1 Root မယ်ဗျာ
iOS 6.1 final Untether Jailbreak အောင်မြင်
IOS 6.1 FINSL official Firmware များ
Huawei U8950D Unlock Code တောင်ြး့ပီး Root လို့ မရ...
U8833 Y300-0000 V4.1.1 ကို Root မယ်
တာဝိုင်တိုင် ၇ှာကြမယ် မြေပုံလေးနဲ့ ....:P